अनमोल केसी हलमा पुग्दा जे देखियो... (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अनमोल केसी हलमा पुग्दा जे देखियो... (फोटोफिचर)
काठमाडौँ। शुक्रबारबाट प्रर्दशनमा आएको चलचित्र कृ ले शनिबार झनै दर्शकको साथ पाउन सफल भएको छ। कृ हेर्न काठमाडौँका हलहरुमा दर्शकहरुको घुँइचो नै लागेको थियो। उक्त चलचित्रका नायक अनमोल केसीको अभिनयलाई पनि उतिकै रुचाइएको छ। यसै क्रममा शनिवार नायक अनमोल सहित कृ का टिम दर्शकहरुको प्रतिक्रिया लिन हलहलमा पुगेका थिए। अनमोल केसी आउने थाहा पाएपछि उनका फ्यानहरु हलबाहिर नै भेला भएका थिए। उक्त भेला केहीबेरमै मानवसागरमा परिणत भएको थियो। नायक अनमोल केसी भने बडिगार्डसहित हलमा पुगेका थिए। दर्शकहरुले पनि चलचित्र कृ हेरेर सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिएका छन्। यसैक्रममा डिसीनेपालले नायक अनमोल केसी हलमा पुग्दाका केही तस्विरलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेको छ।